Fampitomboana ny tsy fivadihan'ny mpanjifa: toro-hevitra avy amin'ny Semalt
Ny tombontsoa rehetra amin'ny raharaham-barotra amin'ny mpividy azy ireo. Ho an'ny fandraharahana an-tserasera, ny vohikala e-commerce dia mikendry ny hahazo mpanjifa miverimberina ao amin'ny tranonkalany ary mampiova azy ireo ho tena mpividy. Teknika marika nomerika marobe no mampanantena fa hampitombo ny fahitana ny tranokalanao any amin'ny toeram-ponenanao. Ny sasany amin'ireto fomba ireto dia ny famokarana votoaty, ny fahitana media sosialy ary ny tena zava-dehibe, ny Search Engine Optimization (SEO). Na izany aza, teknika dizitaly dia mifantoka amin'ny fahazoana ireo mpanjifany amin'ny tranokalanao. Ny fidiran'ny mpanjifanao dia miankina amin'ny teknolojia hafa - tiekarhun renkaat halvalla. Mora kokoa amin'ny mpanjifa teo aloha ny mividy fa tsy ny mpanjifa vaovao. Ny faharetan'ny ankamaroan'ny mpividy tranonkala dia kely. Ity sehatra ity dia midika fa ny fanilihana kely na ny fahadisoana eo amin'ny tranokalanao dia mety hahavery mpanjifa sarobidy. Ny fandraisana ireo mpanjifa tranainy hifikitra akaiky anao dia zava-tsarotra.
Ny Semalt Tale Mpitarika Success Success, Nik Chaykovskiy dia manolotra ny tranonkala e-commerce rehetra hampiasa ireto fomba manaraka ireto mba hitazonana ny mpanjifany:
1. Ho tonga mpanjifom-pantatra.
Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hianarana ny traikefa amin'ny tranonkala iray manokana dia ny fampiasanao azy io. Ity fomba fitsaboana ity dia miantoka fa mandalo ny traikefa feno izay tsapan'ny mpitsidika iray rehefa mampiasa ny tranonkalanao. Ny fahasarotan'ny tarehinao dia fanehoana tonga lafatra ny traikefa amin'ny fanaovana ny fividianana. Ity endri-javatra ity dia mety hanosika anao hanao fanitsiana ilaina amin'ny tranonkalanao fanovozan-kevitra toy ny rohy mifatotra, ny tsipika sy ny sokajy vokariny amin'ny tranga hafa; Afaka mahita ny fahadisoana ao amin'ny tetik'ady SEO toy ny votoaty dika mitovy.
Ny iray amin'ireo fomba amam-panao taloha dia fifandraisana mivantana amin'ny mpanjifa. Ny maritrano dia mampiasa ity teknika ity, ary mbola mitondra tonnes ny fifamoivoizana amin'ny tranonkala. Ny fitsidihana isan'andro isan'andro dia afaka manampy ny orinasa e-varotra haharitra ny fotoana maharitra sy ny mpanjifa mivantana. Ny fihaonana amin'ny mpanjifa dia mitondra voka-pinoana azo itokisana ary hampitombo ny fahafaha-manaon'ny orinasanao. Vokatr'izany, mahazo olona tena mety hitarika ny olona hividy ny tranokalanao ianao. Ankoatr'izany, ity fomba fitsaboana ity dia mitondra fijoroana vavolombelona tena manan-danja, mahatonga ny drafitra ara-barotra hahomby.
3. Tsy momba anao izany.
Mpamaham-bolongana diso iray no mamorona ny tranokalany momba azy ireo. Na ahoana na ahoana, dia mikasika ny mpihaino anao izany. Ho an'ny orinasa iray hitazonana ny mpanjifany, ilaina ny manoratra ny kalitao sy ny votoatiny mifanaraka amin'izany. Vokatr'izany dia mahazo mpamaky mahay ianao ary mahomby hatrany ny mpanjifa vaovao. Amin'ny toe-javatra hafa, ny teknolojia SEO tahaka ny famoahana hafatra manokana dia lasa lavitra lavitra noho ny fahatsapan'ny mpanatrika ny momba azy ireo. Noho izany, tadidio fa ny fahatsapan'ny mpihaino anao ny fananana ny tamboho. Vokatr'izany, io fahatsapan-tena io dia ny tsy fivadihana.
Ny vohikala e-commerce rehetra dia mitaky ny fototra ijoroan'ny mpanjifa mba hahafantarana ny tombom-barotra manan-danja ho an'ny fikojakojana azy. Noho izany, olona iray mivoaka ao anaty aterineto dia tokony hampitombo ny ezaka atao amin'ny fitazonana ny mpanjifany. Ny fanaovana ny mpanjifa mifikitra amin'ny safidinao dia asa sarotra. Ny fidiran'ny mpanjifa dia mety ho sarobidy ho an'ny orinasa rehetra. Ity torolàlana ity dia manomana ny tranokalan'ny e-varotra sy ny ezaka SEO mba hisarihana ny fitazonana ny mpanjifa azo atokisana. Afaka ho afaka hamerina indray ny fahatokisan'ireo mpanjifanao taloha ianao ary hametraka indray mpanjifa vaovao indray.